Lahatsoratra nataon'i Mark Tanner ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Mark Tanner
Amin'ny maha mpiara-manorina sy COO azy, mitantana ny varotra sy ny asany Qwilr i Mark, ary nanampy tamin'ny fananganana ekipa mpivarotra lavitra be sy voazara eran'izao tontolo izao. Tao amin'ny Google dia nanampy tamin'ny fanamafisana ny fiaraha-miombon'antoka mpitory maro izay nahatonga ny Google Play Books sy ebook amin'ny Android. Niverina tany Aostralia izy tamin'ny 2013, ary nanomboka Qwilr niaraka tamin'ny mpiara-manorina an'i Dylan Baskin hamorona indray ny serasera amin'ny alàlan'ny antontan-taratasy.
Qwilr: Ny lozisialy Document Design manova ny varotra sy ny varotra marketing
Alakamisy, Desambra 17, 2020 Alakamisy, Desambra 17, 2020 Mark Tanner
Ny serasera ho an'ny mpanjifa no ain'ny asa rehetra. Na izany aza, amin'ny fanerena COVID-19 fihenan'ny tetibola ho an'ny 65% ​​an'ny mpivarotra, ny ekipa dia asaina manao bebe kokoa amin'ny kely kokoa. Midika izany fa afaka mamorona antoka rehetra amin'ny varotra sy ny varotra amin'ny teti-bola mihena, ary matetika tsy misy rendrarantanan'ny mpamorona na masoivoho hamokatra azy. Ny miasa sy mivarotra lavitra dia midika koa fa ny ekipa mpivarotra sy varotra dia tsy afaka miankina amin'ny fahaizan'ny fifandraisana amin'ny olona intsony